BARBEZIE-BREED DIGAAG: SHARAXAAD, WAX SOO SAARKA UKUN, TARBIYADDA GURIGA, FAA'IIDOOYINKA IYO FAA'IIDO DARRADA - MAQAALLO
Jiilkii hore ee Faransiiska ah ee digaagga Barbados ayaa muddo dheer ku guuleystay ixtiraamka beeralayda Ruushka. Oo ma aha wax la yaab leh, sababtoo ah shimbir shisheeye ah oo aan qabyo ahayn ee daryeelka, si deg deg ah ku habboon cimilada adag oo siinaya hilibka dhabta ah, hilib delicious. Wax badan ayaan ka baranaynaa.
Digaagga barbaarinta ayaa markii ugu horreysay la siiyay dhowr boqolaal ka hor magaalada yar ee Faransiiska ee Barbezieux. Ugu horreyntii, shimbiraha ma dalbanin baahi weyn, sidaas awgeed qarnigii XVIII waxay ku dhowdahay qiyaasta burburka. Waxaan dib u soo nooleeynay doorashadii wax yar ka dibna, inkastoo waqtiga lumay, si dhakhso ah ayaa dib loo soo naqshadeeyay qaabka hore. Dhamaadkii qarnigii XIX ee Faransiiska wuxuu u muuqday naadi barbezie, kaas oo lahaa qaabka ugu faahfaahsan ee noocan ah.
Lakin Faransiis ah ayaa loo dhiibay Russia sannadkii 2000. Shimbiraha si dhaqso ah ayey u heleen caan ka noqoshada waxayna noqdeen kuwo si firfircoon loogu beeray beero yar yar.
Ma taqaanaa? Markii ugu horreysay, digaagga ayaa la qiyaasay ilaa saddex kun oo sano ka hor oo ku yaalla dhulka Itoobiya ee casriga ah, halkaas oo laga dhigo maanta muuqaalkeeda sawiradii hore ee dhaqanka.
Noocyada caanka ah ee Faransiiska, digaaga barboobe ayaa loo tixgeliyaa kan ugu weyn uguna adag. Shimbiraha ayaa si aad ah uga duwan kan ehelkooda iyaga oo u sharaxan qaabka ay ufadhiisanayaan, qaabka muuqaalka ah iyo qaababka isku dhafan.
Marka laga soo tago dhisme xoog leh oo dheer (lab ah 70 cm, haweeney 65 cm), muuqaalka muuqaalka ee muuqaalka muuqaalkiisa dibadda ah waa muraayad madow oo madow (qoolleyaal leh cagaar cagaaran), oo si wax ku ool ah u eegaya asalka udubdhexaadka ah ee dhegaha dhegaha waaweyn iyo dhegaha dhaadheer.
Ka fiiri wakiilada ugu fiican ee hilibka, ukunta iyo ukunta hilibka-ukunta ee digaagga.
celceliska cabbirka madaxa;
Iris waa bunal leh jilicsan jaale ah, indhaha indhahana way madow yihiin;
caleemaha caleenta ah ee caleen lagu qiyaasay oo ku saabsan 10 cm;
dhegaha waa caddaan, halkii ballaadhan, dadka waaweyn ilaa 5 cm;
laabta oo awood leh, caloosha qoyan;
dib u soo laabasho, dib udhac qafiif ah;
baalashoodu waa barbaro;
addimada ayaa xoog leh, grayish midab leh, caws kasta waxaa jira afar farood;
Miisaanka digaaga qaangaarka ah waa qiyaastii 3.5 kg, oo ah cirrid - 4.5 kg.
Cilladaha ugu muhiimsan ee digaagga ay ku dhici karaan hoos u dhaca waa:
isdhaafka midabka midabka midabka madow ee jirka ama midabka cawliga ee addimada;
ragga waxay leeyihiin taraqa;
isugeynta jirka oo aan isu dhigmin;
miisaan aad u yar.
Beeralayda si firfircoon uga shaqeynaya digaagga digaagga barbezie, waxay ku tilmaamaan inay yihiin shimbiro dabiici ah, nabad ah, laakiin aad u xiiso badan, taas oo dhab ahaantii loo qoondeeyey meel ballaadhan oo loogu talagalay socod dheer. Goobta deyrka ah, waxay ku farxi doonaan inay maalin kasta ku socdaan adhiga yaryar ee ku hareeraysan dayrka, iyagoo baaraya dhammaan dildilaaca raadinta nafaha nafaqada yar iyo nafaqada. Shimbiraha iyo wakiillada dhalinyarada ee deyrka dabiiciga ah ayaa si taxadar leh loola dhaqmi doonaa.
Nasiib darro, dareenka dhalinyaradu waa mid aan la ilaalin karin digaagga, sidaa darteed beeralaydu si guul leh ayey u isticmaalaan hab kale oo hubaal ah dhawr sano - oo ah kobcin.
Baro sida loo kobciyo digaagga hoyga guriga, sida loo sameeyo qalab qaboojiye adiga oo ka soo qaboojiyaha.
Ma taqaanaa? Digaagga iyo qoob-ka-shaqeeyayaashu waxay leeyihiin sirdoon si fiican u horumarsan - inkastoo xajmiga maskaxdooda, si fudud ay u ogaan karaan milkiilahooda, inay aqoonsadaan in ka badan boqol qof, waxay is bar-bardhigaan waqtigooda, xusuustaan ​​waqtiga quudinta, iyo inay aqoonsadaan degaankooda iyo deriskooda.
Nooca wax soo saar ee Barbados waa mid guud - digaagga waxay awoodaan in ay soo saaraan ukunta cagaarka ah oo waaweyn iyo, oo ay la socdaan roosters, hilib tayo fiican leh.
Waqtigee ayuu jiraa celceliska wax soo saarka ukunta sannadlaha ah?
Digaagga waxay bilaabaan inay si tartiib tartiib ah u koraan, korriinkooda waxay ku dhacaan qiyaastii 5-6 bilood ee nolosha, si kastaba ha ahaatee, waxay bilaabaan inay muujiyaan tirooyinka ugu badan ee tirada ukunta ka dib 1 sano. Tilmaamaha celceliska sanadlaha ah: 150-200 ukumood oo culeyskiisu yahay 90 garaam. Ukunta ukunta waa weyn
Tilmaamaha ugu weyn ee wax soo saarka waa hilib gaar ah. Taasi waxay ka dhigtay beerta Barbaze caan ah oo qiimo leh. Midabka badeecadu waa mid casaan ah, dhadhanka ayaa lagu sharxay sida loo nadiifiyey loona dhajiyay, iyo halabuurka wuxuu hodan ku yahay fiitamiinada iyo nafaqooyinka. Tani waxay si gaar ah u qadarisaa boorsooyinka.
Waxaan kugula talinaynaa in aad barato qaababka taranka Brama, Poltava, Leggorn, Rhode Island, Orpington, Redbro, Sussex, Maran, Dominant, Minorca, Foxychik, Faverol, iyo digaagga Andalusian.
Muddada ugu fiican ee taranka ee hilibka iyo ukunta waxay soconaysaa illaa laba sano. Sannad saddexaad, waa in la beertaa in la fuliyo beddelaad qorshaysan oo ah shimbirta by jiilka, ka dib markii digaaggu leeyihiin hoos u ah da'da dabiiciga ah ee la xiriira wax soo saarka ukunta.
Si daaqada Faransiisku u noqoto mid guul leh oo aan la socdo wax dhibco ah, waa lagama maarmaan in la adkeeyo dhammaan xaaladaha lagu taliyey ee xaqiijiyay beeraley badan oo shaqadooda gaarka ah.
Coop waa in lagu qalabeeyey sida waafaqsan shuruudaha gaarka ah ee taranka barbezie:
Goobo meel ku habboon. Meeleynta waa in lagu sameeyaa dhererka qiyaastii 40-50 cm dhulka. Ma jiro wax kale oo dheeraad ah, sidaa darteed digaagga ma jebin karo, ka boodi kartaa height ah.
Xoriyad iyo meel. Dhisida qol loogu talagalay coop digaag, waa in la xasuustaa in 1 digrii. m wuxuu dejin karaa wax ka badan saddex qof.
Hal buulood waa inuu leeyahay aag 40 ilaa 45 mitir oo laba jibbaaran. cm, si ay u degto ilaa 15 lakab.
Xakamaynta qasabka ah ee hawada.
Beddelka buulkisa waxaa la samayn karaa heer caadi ah, oo ka kooban caws, gariir, qoryo qoryo ama lime lakulma. Beddelka ayaa qayb ahaan loo sameeyaa, lakabka keliya waa in laga saaraa.
Ma aha lagama maarmaan in lagu kululeeyo coop digaaga - lid ku ah, waa in si wanaagsan loo nuugo (laakiin aan lahayn qoraalada!).
Iftiimintu maaha in laga badbaado.
Waa muhiim! Waa lagama maarmaan in la iska ilaaliyo qoyaanka qoyaanka, sidaas darteed digaagga iyo qoob-ka-shaqeeyayaashu ma qabaan dhibaatooyin xanuun leh boogaha.
Sida kor ku xusan, socodka digaagga halkan waa in la sameeyaa maalin kasta waxayna qaadataa maalin dhan. Deedka waxaa la dhigi karaa mid hooseeya, iyo dhulalka socodka - caws cagaaran cagaaran.
Xilliga Qaboobaha ee aagga dhexe ee digaagga Faransiiska ah maaha mid cabsi leh, si kastaba ha ahaatee, haddii ay jirto xaalad dheerad ah oo adag (ka yar 8 ° C), shimbiraha ayaa la kulmi kara raaxo iyo xitaa jirran. Sidaa daraadeed, qalabka digaaggu xilliga qaboobaha waa xaalad kale oo muhiim ah oo ku habboon dayactirka barbesie.
Doorashada guusha-guuleysiga waxay noqon doontaa dhismaha tiknoolijiyada maskaxda, taas oo u oggolaanaysa inaanay dhisin qolka leh meel ballaaran, oo leh karti ka badan 40 digaag, laakiin sidoo kale waxay bixisaa xayiraadda qasabka ah ee alaabooyinka sida xumbada polystyrene, caagada xumbada iyo dhogorta macdanta. Qalabka waxaa la dhigaa inta udhexeysan ee la gooyey iyo xargaha oo xiran, loo xushay dammin.
Intaa waxaa dheer, laga bilaabo drafts qabow si fiican u badbaadin:
filimaan aan firfircooneyn;
rakibidda kuleyliyaha gaarka ah ee gudaha;
dhulka hoostiisa ayaa lagu daboolay gogosha gaarka ah (caws engegan, peat qallalan, balka dhererka 20 cm).
Guud ahaan, cuntada barbezie ma aha mid aad uga duwan liiska digaagga kale. Digaagga ayaa ku siin kara mashiinka guriga ka kooban oo ka kooban malaayadda, xayawaanka, miro, galley, digir, bran, saliid qorrax leh, qolof iyo milix. Xilliga xagaaga, waa suurad wacan in la sifeeyo suxuunta leh khudradda cusub iyo cawska, iyo xilliga qaboobaha - maro-qallalan ka hor.
Marka laga soo tago dalabaadka gastronomic aasaasiga ah, mid ka mid ah mucjisada Faransiiska Faransiiska waa in la xuso - tani waa baahi joogta ah dhoobo. Taasi waxay leedahay saameynta ugu wanaagsan ee abuuritaanka lafaha xooggan oo adag. Saxan dhoobo waa in si gooni gooni ah loo dhigaa saxarada kale si qof waliba u go'aamin karaa baahidiisa maalin walba.
Waa muhiim! Wakiilo ka mid ah caanahan ayaa u nugul inay cayilaan. Kufsigu wuxuu halis galiyaa miisaanka oo keliya, laakiin sidoo kale joojinta ukumaha.
Quudinta digaagga barbeze waa inay ahaato mid si qarsoodi ah 4 jeer maalintii, iyadoo raacaysa nidaam sahlan.
1 quudinta - isku dar qalalan ama hadhuudh;
2 iyo 3 quudinta - fitamiinka quudinta iyo mashiinka dareeraha;
4 quudinta - hadhuudh ama qalajin.
Marka la diyaariyo soo kabashada iyo nuujinta xayawaanka yaryar, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo waqtiyada la xiriira dabeecadaha ukumaha, ugxanta digaagga iyo quudinta.
Sida kor ku xusan, digaagga Barbados waxay leeyihiin dhibaatooyin ku yimaada dareenka dhalinta, sidaa daraadeed waxay u fiicantahay in la isticmaalo xashiishka si loo hubiyo in guurka la helo. Hawlgallada, ukunta miisaankeedu ka yar yahay 70 g ayaa la doortaa, taasoo ka imanaysa digaagga nool iyo firfircoon si deg deg ah.
Waxaad xakameyn kartaa tayada qalabka wax lagu buuxiyo iyadoo la adeegsanayo baaritaanka, kaas oo sidoo kale fududahay inaad sameyso gacmahaaga.
Qaar ka mid ah xeerarka aasaasiga ah ayaa kaa caawin doona inaad sameysato daryeel habboon oo looxa chicks oo dhan:
Chicks ilaa 1 bilood waa in aan loo ogolaan dibedda, maadaama ay bilaabayaan dabayaaqadii dambe - waxaa lagula talinayaa inay ku hayaan meel kulul, oo leh heerkul hawo ah 28-30 ° C;
Barbezie yaryar si dhakhso ah ayuu u koraa oo u kobciyaa, abuurista culus xooggan laf-dhabarka, marka laga bilaabo maalmaha ugu horreeya ee cuntada aad u baahan tahay inaad ka samayso macdanta macdanta;
si looga hortago cudurrada kala duwan 8da toddobaad ee digaagga ayaa lagula talinayaa inay fuliyaan tallaalka koowaad.
Bishii koowaad ee nolosha, cuntada xayawaanka dhalinyarada ah waxay inta badan ka kooban tahay farmaajo qoyan oo dufan ah, ukunta la jajabiyey (adag-la kariyey), maqaarka iyo hadhuudhkii la jarjaray. Laga bilaabo toddobaadkii labaad, beeralayda ayaa si tartiib tartiib ah ugu dari kara quudinta, taas oo ah inay noqoto cuntada ugu weyn ee digaagga dhammaadka bisha. Laba bilood ka dib, dhallinyaradu mar hore ayaa loo wareejin karaa hadhuudh iyo qoyan qoyan, ma ilaawin waxtarka nafaqada iyo fitamiinada.
Meesha muhiimka ah ee xulashada digaaggu waa kufilanaanta cuntada oo leh kalsiyum - mareeg ah kaas oo ka caawiya samaynta lafaha xooggan ee digaagga iyo qashinka oo saameynaya baalalkooda dhakhso ah. Calcium wuxuu caawin doonaa inuu kobciyo cuntada ee chicks leh:
hilibka iyo lafaha iyo cuntada kalluunka;
Ku dhowaad saxanka cuntada waa in sidoo kale la geliyaa weel siib leh qolof, nuurad ama niigsan.
Iyadoo lagu saleynayo dib u eegista badan, waxaa suurtagal ah in la go'aamiyo faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada ka jirta ilaalinta digaagga barbezie.
Aynu bilowno faa'iidooyinka:
sicirka badbaadada oo sareeya iyo caafimaad wanaagsan;
Isbedelka wanaagsan ee xaaladaha cimilada ah;
Tayo badan oo tayo wanaagsan leh (ukun weyn iyo hilibka lo'da, oo la mid ah dhadhanka ciyaarta).
geedi socod dheer oo boodh ah oo digaag ah;
dareenka hooyada oo liita ee digaagga;
Sida aad u arki karto, faa'iidooyinka faraskan Faransiiskan ah ayaa la xakameynayaa cilladaha yar yar, taas oo xitaa beer aan fiicnayn iyo beerta cusub oo si sahlan u saxi karta dadaalkiisa. Sidaa darteed, digaagga digaagga ee barbeze ayaa macno samaynaya xitaa beeraha yaryar.
Video: Astaamaha barbaarinta
Si daacad ah ayaan u sheegayaa in ciyaarta laga bilaabo ma aanan wax cunin oo aanan ogeyn waxa ay dhadhanka sida. Su'aashani waxay aniga ii tahay aniga ahaan. Faransiiska, noocyo badan oo digaag ah, waxaa jira, ku dhowaad gobol kasta wuxuu leeyahay nooc lagu magacaabo. Laakiin hal Barbisyo oo keliya ayaa caan ku ah THEM si ay u dhadhan tahay, mana ubaahnid xayiraad iyo naaxin gaar ah. Waxaa laga yaabaa inaan, sida ay yiraahdaan, ma qadarin doono (caadada lugaha digaaga), oo laga yaabo inaan ku qiyaasi karno, waqtigu wuxuu ku dhajin doonaa wax kasta oo meelkiisa ah. Eeg hilibka Barbezyo oo iska leh qeeybta alaabta. Iyo in ka badan ... digaagga Faransiiska waxaa loo tixgeliyaa kan ugu weyn.
Ha ilaawin inaad gashato xargaha, ogeysii. Xilliga xagaaga ma dhibban kartid, waxay heli doonaan wax kasta oo aad u baahan tahay, gaar ahaan socodka weyn. Xilliga jiilaalka, marka heerkulka digaaga digaagu ka hooseeyo 0, waxaan u qaybiyaa 2 quudinta - subaxda iyo quudinta iyo sarreenka habeenkii ee kululaynta.